vCita: Kugadzwa, Kubhadhara, uye Kubata Portal Yemabhizinesi Madiki Sites | Martech Zone
LiveSite na vCita zvinotora zvese kuoma kwekugadzwa kwekugadzwa, kubhadhara pamhepo, manejimendi manejimendi uye kunyangwe kugovera zvinyorwa uye kuzviisa mune yakanaka slide pane webhusaiti yako.
Zvimwe Zvikamu zve LiveSite na vCita
Bata manejimendi - Tora ruzivo rwevatengi uye gadzirisa hurukuro yavo nechikwata chako. Iyo webhu interface inokutendera iwe kubata vanobata, kuwana nzwisiso, kuteedzera kwevatengi kudyidzana, kupindura uye kuteedzera-uchishandisa chero chishandiso. Unogona kunyange kugadzirisa kutaurirana kwevatengi, zviyeuchidzo uye zviyeuchidzo
Gadzira Mafomu - Unganidza hutungamiriri uye ruzivo rwevatengi kuburikidza neiyo portal zviri nyore uye nyore neayo epamhepo fomu anovaka.
Kuronga Pamhepo - Bvumira vatengi kuti vagadzire uye vagadzirise zvakare nguva dzekugadzwa chero nguva, kubva kune chero chishandiso. Iwe unogona kupa online rondedzero yemasevhisi, mubhadharo uye kuronga sarudzo. Zvimisikidzo zvakagadziriswa uye zviyeuchidzo zvinobatsira mukuderedza isina-show. Iyo inotofananidza iyo khalendari neako aripo Outlook, Google, kana iCal kalendari.
Kubhadhara Pamhepo uye Kubhadhara - Ipa vatengi mukana wekubhadhara kiredhiti kadhi, zviyeuchidzo zvoga, uye invoice dzetsika. Iwe unogona kuseta iyo mari, mutero uye unopa zvidzoreso.
Gwaro Kugovana - Tumira zvakavanzika uye gamuchira mafaera nemakasitoma pamusoro pewebhu portal pane chero chishandiso.
LiveSite na vCita zvakare ine WordPress plugin kuti iite nyore kuisa yavo script kune yako WordPress saiti! Edza izvi mahara pane yako saiti uchishandisa yedu yekubatana chinongedzo mune ino positi.
Tags: mamiriro ekugadzwabata manejimendigwaro kugovanafomu muvakiinvoiceonline invoicingonline kubhadharakuronga pamhepobudavcitaWidget yewebhu